दोस्रो अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन सम्पन्न गुणस्तरीय शिक्षाको लागि काठमाण्डौँ प्रतिवद्धता र सिफारिस पत्र जारी गर्दै दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन २०७६ सम्पन्न भएको छ । भदौ ७ गतेदेखि ललितपुरमा सुरु भएको सम्मेलन आज सकिएको हो । सोमबार, भदौ ९, २०७६
अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन ललितपुरमा सुरु शनिबार, भदौ ७, २०७६ आजबाट ललितपुरमा सुरु भएको गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले गुणात्मक शिक्षामा जोड दिईरहेको बताउनुभयो ।
भान्सा महंगियो, छोइनसक्नु भाउ ! बिहिबार, साउन १६, २०७६ असारको पहिलो हप्तासम्म घिउ सिमिको मूल्य प्रतिकिलो ६९ रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिना अघि ५३ रुपैयाँ रहेका घिरौलाको मूल्य ७८ रुपैया पुगेको छ भने ७८ रुपैया किलो रहेको भटमास १ सय ५ रुपैया पुगेको छ । २६ रुपैयाँ रहेको सेतो आलु ३३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
विदेश जाने महिलामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मानवअधिकार आयोगको माग बिहिबार, साउन २, २०७६ प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि गम्भीर ज्यादती र जोखिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको काम र सेवा सुविधा तोकेको भन्दा फरक हुने गरेको प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा खोई ? बुधबार, वैशाख ४, २०७६ काठमाडौं । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
जरायोटारबासीको एकिकृत वस्ती मोह शुक्रबार, चैत ८, २०७५ गोरखा भूकम्प २०७२ पछि पूर्वाधारयुक्त एकिकृत बस्ती सरकारको प्राथमिकतामा छ । तर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका जरायोटारका नागरिकले भने चार वर्षदेखि एकिकृत वस्ती बनाउने सपना पूरा गर्न सकेका छैनन् ।